Lionel Messi oo amaan kala dul dhacay daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk – Gool FM
Lionel Messi oo amaan kala dul dhacay daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk
(Barcelona) 17 Okt 2019. Kabtanka kooda Barcelona ee Lionel Messi ayaa amaanay daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk, kaasoo haatan loo aqoonsaday inuu yahay daafaca ugu fiican adduunka, marka loo fiiriyo aragtida dad badan.
Lionel Messi ayaa tilmaamay in Virgil van Dijk uu leeyahay faa’iidooyin badan ee ka dhigeysa inuu ka duwanaado daafacyada kale.
Messi ayaa ku wajahay Virgil van Dijk labadii kulan ee wareega afar dhamaadka tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkii hore, kulankii ka dhacay Camp Nou ayuu Lio si weyn u dhibaateeyay van Dijk, xilli ay Barca kulankaas ku adkaatay 3-0.
Laakiin wax walba waxay isbadeleen kulankii lugta labaad, van Dijk ayaana soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, isagoo ka caawiyay kooxdiisa Liverpool inay guul kagga gaarto Barcelona 4-0.
Haddab Messi ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuu ku amaanay daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk wuxuuna yiri:
“Waa daafac fiican, aad ayuu u dhakhso badan yahay, jir ahaanna waa mid xoogan, laakiin wuxuu leeyahay awood xoogan”.
“Waa mid dhaqsi badan sababa la xiriira talaabadiisa aadka u weyn, waa mid cajiib ah, dhanka daafaca iyo xitaa weerarka, sidoo kale wuxuu dhaliyaa goolal badan” ayuu hadalkiisa ku soo xiray kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
“Waxaan diyaar u ahay inaan u ciyaaro Arsenal” – Özil oo fariin u diray Unai Emery